वीरका बिरामी डाक्टर
ज्याेति तिलाञ्जली काठमाडौं, २२ साउन
वीर अस्पतालका अहेब टीकाराम पनेरुलाई सामान्य ढाड दुख्ने समस्या छ । उनी हरेक दिन वीर अस्पताल आउने जाने गर्छन् । कार्यभार राम्रै सम्हाल्छन् ।
वीर अस्पतालको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएका विभिन्न खेलमा पनेरु पनि सहभागी थिए । अन्य समयमा उनी समान्य देखिन्छन् । तर, सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा उनलाई चिकित्सकले गम्भीर बिरामी भनेर सिफारिस गरिएको छ ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार कर्मचारी समायोजन महाशाखाका प्रमुखले नै उनको नाम सिफारिस गरेका थिए । कर्मचारी समायोजनपछि समायोजन महाशाखा पनि विघटन भइसकेको छ ।
पनेरुले ढाड खिइएको र लामो समयसम्म हिँड्न र उभिन नमिल्ने भनेर रिर्पोट बनाएका छन् ।
त्यस्तै, वीर अस्पतालकै अर्का कर्मचारी हुन्, अरुण महताे । उनलाई पनि मेडिकल बोर्डले गम्भीर बिरामी भनी रिर्पोट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । वीर अस्पताल र मेडिकल बोर्डले महत्त्वलाई प्रेसर, घाँटीको हड्डी खिइएको, पित्तथैलीमा फोका भएको भनी सिफारिस गरेका छन् । उनी पनि अस्पतालमा त्यति गम्भीरजस्तो देखिँदैनन् ।
तर, रोचक कुरा के भने अरुण महताेलाई अर्थोपेडिक सर्जनले हेर्नुपर्ने चिकित्सक हुनुपर्नेमा फिजिसियन डाक्टरको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ भनी सिफारिस गरेका छन् । वीर अस्पताल र मेडिकल बोर्डका अनुसार उनी फिजिसियन डा. सञ्जयकुमार ठाकुरको निगरानीमा उपचार गराइरहेका बिरामी हुन् ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा केन्द्रमै बस्न कर्मचारीले यसरी फर्जी रिपोर्ट बनाउँदै मन्त्रालयमा पेस गर्न थालेका हुन् । रोग लागेको र चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्ने भनी रिपोर्ट बनाएर मेडिकल बोर्डबाट पास गराई मन्त्रालयमा पेस गर्ने कर्मचारी बढेका छन् ।
नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेपछि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई चाहेको स्थानमा समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । सो दफालाई दुरुपयोग गर्दै वीर अस्पतालका दर्जन बढी कर्मचारीले मेडिकल बोर्डबाट कडा रोग भनी सिफारिस बनाएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ मा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिले रोजेको ठाउँमा समायोजन हुन पाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निजामती सेवा नियमावली २०५० का अनुसार कडा रोग भन्नाले मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरसम्बन्धी रोगलाई जनाउँछ । तर, कर्मचारीको सिफारिसमा भने उच्च रक्तचाप, ढाडको दुखाइ, बाथजस्ता रोग भनी सिफारिस गरिएको छ ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार शारीरिक रुपमा केही नभएका कर्मचारी दैनिक ४/५ किलोमिटर मोटरसाइकल चढेर आउने र भर्‍याङबाट तलमाथि गर्ने कर्मचारीलाई पनि कडा रोग भएका र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको बिरामी भन्दै सिफारिस गरिएको छ ।
कोही कर्मचारीले आफ्नो नजिक रहेका चिकित्सकको रिर्पोटका आधारमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिएका छन् भने कसैले समायोजन महाशाखामा रहेका नजिकका आफन्तको सहयोगमा सिफारिस लिएका छन् ।
अस्पतालमा कार्यरत डिल्लीराम खनाल, डिल्लीराम आचार्य, युवराज सुवेदी, जीवनकुमार श्रेष्ठलगायतका कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डले कडा बिरामी भनी सिफारिस गरेको छ ।
झुटा मेडिकल रिपोर्टका विषयमा मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कालु सिंहले भने, ‘फर्जी रिपोर्टका ९ वटा केस काउन्सिलमा आएको छ । चिकित्सकले गलत सिफारिस गराएको प्रमाणित भएमा चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०७६, १३:२०:००